Timelines Archive - UKK Longyi
Every different nationality has its own culture and its own traditional costume. Its our generations’ responsibility to preserve and prolong this valuable tradition.
မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး "သံဃာတော်အပါး (၃၀,၀၀၀) ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲကြီး"
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး "သံဃာတော်အပါး (၃၀,၀၀၀) ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲကြီး" တွင် UKK လုံချည်မှ တတ်စွမ်းသမျှ ပါဝင်ခဲ့သော ဒါနကုသိုလ်ကို လုံချည်ချစ်သူများ သာဓုခေါ်နိုင်စေရန် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါသည်။
UKK လုံချည်မှ MYEA Entrepreneur Award 2019 Finalist အဖြစ်ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံရရှိခဲ့
ပြီးခဲ့သည့် ၁၆.၁၁.၂၀၁၉ (စနေနေ့)တွင် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ မြန်မာပြည်တဝှမ်းရှိ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များကို စုစည်းကာ Entrepreneurship 4.0 ပွဲကြီးကို ရန်ကုန်မြို့၊ Fortune Plaza တွင်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Entrepreneurship 4.0 ပွဲကို မနက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အသီးသီးဖြင့် ဆုရရှိသူများကိုဆုပေးအပ်ခဲ့ရာ
+95 1 510 294
No. 314 (A), U Wisaya Road,
Kamaryut Tsp, Yangon,
Copyright © 2021 UKK Burmese Pride All Rights Reserved.